Ny fakana an-keriny ny Bacon amin'ny Dawn, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny fakana an-keriny ny Bacon at Dawn, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao asehonay anao anio mba ampidininao maimaim-poana dia manana anarana hafakely izay kely na tsy misy azontsika atao an-tsaina ny momba azy. Ny fakana an-keriny ny Bacon at Dawn dia lalao an-tsehatra feno fihetsika, fitifirana ary indrindra hatsikana, na dia mety tsy ho an'ny rehetra aza. Ny fakana ankeriny ny Bacon at Dawn dia misy vidiny mahazatra 0,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra, afaka manararaotra sy misintona azy isika izao satria efa misy maimaim-poana.
Ny tantaran'ity lalao ity dia mampahafantatra antsika ny vazivazy izay ho hitantsika mandritra ny fivoaran'ny lalao. Nanafika ny tany vahiny noana izay mitondra ny kisoa rehetra eto ambonin'ny planeta. Alain'izy ireo daholo ny kisoa satria hitan'izy ireo fa tsy afaka miaina tsy misy bacon isika ary fantatr'izy ireo fa tena ilaina amin'ny fahasalamantsika izany satria be dia be no lanintsika. Ny tanjonay dia ny hamono ny vahiny rehetra ka ny robot sy ny UFO hisorohana azy ireo hangalatra fefy, ary noho izany ny bacon.
Ny fakana an-keriny ny Bacon amin'ny endri-tsarin'ny maraina
Miadia amin'ny tafiky ny vahiny, robot, ary UFO amin'ny ambaratonga feno fanamby sy zava-mahaliana!
Hanketo, hitifitra ary hiady amin'ny lalanao lehibe farany!
Mahazoa fitaovam-piadiana mahery vaika sy fanavaozana fiadiana rehefa mandeha ianao.
Tehirizo ny kisoa ary alao antoka fa mijanona eto an-tany ny bacon!
Miaina traikefa nahafinaritra noforonina noforonina mahatsikaiky noforonin'ny saina mamiratra rehetra eto ambonin'ny tany.
Avereno atao amin'ny fitaovam-piadianao vaovao ny haavony mba hamita ireo fanamby rehetra.
Tafiditra amin'ny Game Center: mifaninana mba ho akoho ALPHA manerantany amin'ny ambaratonga tsirairay.
Mampiasa Metal ny lalao hahazoana ny traikefa an-tsary tsara indrindra ho an'ilay mpilalao.
Ny fakana an-keriny ny Bacon tany amin'ny mangiran-dratsy, ny Tantara an'ny akoholahy mahery fomaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny fakana an-keriny ny Bacon at Dawn, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Lazainay aminao ny fomba fiasan'ny politikan'ny fiverenan'ny Apple mandritra ny Krismasy
Efa hitantsika ny atin'ny Apple Campus vaovao ao Cupertino